Azerbaijan oo furtay madxaf meel bannaan ah ku yaalla oo lagu xusayo dagaalkii lixda isbuuc ee ay ku qabsatay gobolka Nagorno-Karabakh, sannadkii hore. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Azerbaijan oo furtay madxaf meel bannaan ah ku yaalla oo lagu...
Azerbaijan oo furtay madxaf meel bannaan ah ku yaalla oo lagu xusayo dagaalkii lixda isbuuc ee ay ku qabsatay gobolka Nagorno-Karabakh, sannadkii hore.
Azerbaijan waxay furtay madxaf meel bannaan ah ku yaalla oo lagu xusayo dagaalkii lixda isbuuc ee ay ku qabsatay gobolka Nagorno-Karabakh, sannadkii hore.
Waa jardiin lagu sameeyay waxyaabo la xiriira dagaalkaas oo laga furay caasimadda, Baku. Waxaa la dhigay hubka iyo gawaarida dagaalka ee laga soo qabsaday ciidamada Armenia.
Arrintan waxay ka careysiisay dalka Armenia, oo Azerbaijan ku eedeysay “dulqaad la’aan iyo abuuridda naceyb bulsho”.
Dagaalkii sannadkii hore waxaa ku dhimatay in ka badan 5,000 oo qof, kumannaan kalena way ku barakeceen. Bishii November, waxay labada dhinac waxa saxiixdeen heshiis nabadeed lagu soo afjaray colaadda.
Nagorno-Karabakh waxaa loo aqoonsan yahay in ay ka tirsan tahay Azerbaijan, balse inta badan dadka ku nool waa Armeniyiin.
Sannadkii 1990-maadkii, Armenia waxay qabsatay gobolkaas. Balse dagaal cusub ayaa ka dhex qarxay bishii September, Azerbaijan ayaana dib u qabsatay inta badan dhulkaas. Hadda ciidamada nabad ilaalinta Ruushka ayaa la kala dhex dhigay labada dal.
Goobta laga dhigay madxafka waxaa lagu dhejiyay astaamo. Midda ku dheggan halka laga galo waxaa ku qoran “Karabakh inagaa leh!”
Gudahana beertan waxaa yaalla, taangiyada, hubka iyo dharka ciidamada Armenia. Sidoo kale, kartoonno dad loo ekeysiiyay oo loo xiray dharka askarta Armenia ayaa la dhigay goobo, qolal iyo hoolal ku yaalla meeshan.
Xaruntan waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha Azerbaijan, Ilham Aliyev, horraantii bishan. Armenia waxay sheegtay in ujeedada arrintan ay tahay “in si aan qarsoodi ahayn loo sharaf dilayo” askartii ku dhimatay ama lagu qabtay dagaalka.
Dowladda Azerbaijan ayaa beenisay arrintaas. Waxay tilmaamtay in ay xaq u leedahay in ay soo nooleyso guusheedii dagaalka ay ka gaartay.
Previous articleShirkii madaxweynayaasha Galmudug, HirShabeelle iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta iyo Raisal wasaaraha oo socda. Sawiro.
Next articleYurub oo ka wal walsan Go’aanka Denmark dib u gu celinayso Qaxootiga Reer Suuriya
Adeegga internet-ka oo 12 saacadood ka go’anaa magaalo ku gaal ku...
Adeegga internet-ka oo 12 saacadood ka go'anaa magaalo ku gaal gobolka British Colombia ee dalka Canada, ayaa lagu eedeeyey xawayaanka loo yaqaan Beavers-ka. Shirkadda...
Gudoomiye Kuxugeenka Koowaad ee Gobolka Banaadur oo booqday dhawacyada ku jira...
Midoowga Afrika oo sheegay qalalaasaha ka aloosan Muqdisho dhex...
Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka qora taariikhda Soomaaliya oo ...
Villa Somalia oo u ololeyneysa keensashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee...
War deg deg ah: Dagaal culus oo goor dhawayd ka dhex...
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 22, 2021 0